Oyena mvelisi mkhulu weoyile yeoyile kunye neoyile elungileyo kwihlabathi Ezezimali
USusana Maria Urbano Mateos | | iinkampani, Izaziso
Ioyile yeminquma yigolide yeMeditera, yinxalenye yokutya kwethu kwemihla ngemihla, kwaye asimithi nasiphi na isidlo ngaphandle kweoyile yomnquma. Ngaba unokucinga ngesonka se-tumaca ngaphandle kweoli yeoli? Nokuba nguwe okanye nabani na.
Kwaye ukusetyenziswa kwayo akusasetyenziswanga kuphela kulwandle lweMeditera, kunye nabazalwana base-Italiya, amaGrike namaFrentshi, kodwa ukusetyenziswa kwayo kuye ngokuthe ngcembe kwanda jikelele, kwaye amazwe apho ingeyonxalenye yokutya kwabo, sele iyinxalenye yawo.
Ngokucacileyo, xa yakho ukusetyenziswa kuyanda, ikwanyusa isidingo sokuvelisa ioyile yomnquma 'in situ', kuthintelwe ukungenisa inani elikhulu leoyile yomnquma, umzekelo, e-Itali, elona lizwe lithumela ngaphandle ioyile enkulu kwihlabathi.
Ukusetyenziswa kuye kwanda ngokubulela kutshintsho lokutya kwezigidi zabantu, abafuna ukutya okusempilweni, kunye ioyile yomnquma ibonelela ngezibonelelo ezininzi zempilo, Ngokuchasene nesundu, ikhokhonathi okanye ioyile esulungekileyo, etyiwayo kumazwe amaninzi ehlabathi.
Oku kusikhokelela kumbuzo:
0.1 Yeyiphi eyona mveliso yeoyile yomnquma inkulu emhlabeni?
1 1.- eSpain
1.1 2.- ElamaTaliyane
1.3 4.- iTurkey
1.4 5. - iTunisia
1.5 6.- ePortugal
1.6 7.- iSiriya
1.7 Amazwe avelisa ioyile yomnquma efanelekileyo kwihlabathi
Yeyiphi eyona mveliso yeoyile yomnquma inkulu emhlabeni?
Kunzima ukutsho, kuba njengayo yonke enye into, kukho amazwe ahlukeneyo akhokelayo kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye kulungile ukwazi ipanorama yabo bavelisa, bathumele ngaphandle kwaye batye kakhulu.
Eli nqaku luhlalutyo lokufumanisa oyena mvelisi weoyile mkhulu emhlabeni.
Ngenxa yoko unoluvo lweepesenti: phakathi kuka-2015 ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, malunga ne-2.6 yezigidi zeetoni zeoyile yomnquma esele isetyenzisiwe emhlabeni.
Akumangalisi ukuba iSpain lelona lizwe livelisa ioyile enkulu emhlabeni. Ivelisa iipesenti ezingama-45 zeoyile esetyenzisiweyo kwilizwe liphela; isixa esimangalisayo.
Indawo esetyenzisiweyo zizigidi ezintlanu zeehektare zeminquma.
Ingxaki eSpain kukuba uninzi lwayo luthunyelwa e-Itali, ilizwe eliyiphathayo, kwaye ithumela kwelinye ilizwe ngomgangatho ophezulu kuneoyile yaseSpain. I-Itali, yona, iphinda iyithumela kumazwe ehlabathi.
Ngaphandle kwesixa esikhulu seoyile yomnquma eveliswa lilizwe lethu, kuqikelelwa ukuba yi-20% kuphela yeoyile eyongezelelekileyo.
Ngeso sizathu, iSpain inegama lelona lizwe likhulu lokuvelisa ioyile emhlabeni, kodwa hayi eyona ibalaseleyo.
Iipesenti ezingama-77 zeoyile yomnquma eveliswa yiSpain zivela eAndalusiaNgaphandle kwemveliso enkulu, iSpain ingenisa isixa esikhulu seoyile yomnquma.
I-Itali ivelisa i-25% yeoyile yomnquma Ityiwa emhlabeni, kwaye ngokungafaniyo neSpain, inodumo okanye isihloko sokuvelisa ioyile yomnquma ebalaseleyo emhlabeni.
Olona phawu luphambili lweoyile yeminquma yase-Italiya kukuba ineentlobo ngeentlobo zeencasa kunye nezitayile, umzekelo, ilizwe lethu elingenalo. Kuqikelelwa ukuba I-Itali ine-gastronomy yayo, iindidi ezingama-700 ezahlukeneyo zeoyile yomnquma.
Nangona i-Itali ivelisa ioyile yomnquma kangangesiqingatha seSpain, yeyona ndawo ithumela kumazwe angaphandle ioyile enkulu, kuba ingenisa isixa esikhulu seoyile evela kwamanye amazwe anje ngeSpain, ikakhulu iGrisi, kwaye ibaphatha ukuba ibanike eyahlukileyo. ezahlukeneyo, emva koko uzithumele kwelinye ilizwe.
Oko kuyenza ukuba i-Italiyane ibe lelona lizwe lingenisa elizweni likhulu, kunye neoyile yomnquma, kwihlabathi.
Udidi oluphambili alunakukumangalisa, kodwa ama-nuances enza ukuba ahluke. IGrisi ivelisa malunga neepesenti ezingama-20 zeoyile yomnquma Ityiwa emhlabeni, ikhuphisana ngokusondeleyo ne-Itali.
Njengomphumo wengxwabangxwaba yezoqoqosho nezopolitiko ehlasela ilizwe, abantu abaninzi baye bafumanisa ukuba i-oyile yomnquma yamaGrike ikhethekile, ngenxa yezizathu ezibini:
I-70% yeoyile yomnquma eveliswa yiGrisi yioyile eyongezelelweyo, ukugqitha naliphi na ilizwe elivelisa ioyile emhlabeni
IGrisi lelona lizwe lisebenzisa ioyile yomnquma ehlabathini, ngenxa yokutya kwayo kunye nesiko lemillenary
Imveliso yayo igxile kwizigidi ezintathu zeehektare, phantse iinkampani ezingama-3000 ezinikezelwe kwimveliso yeoyile yomnquma, evelisa iindidi ezili-100 ezahlukeneyo zegolide zeMeditera.
Ioyile yomnquma ikhankanywe nguHomer: ukusetyenziswa kwayo kuyintsomi.
I-Turkey lelinye ilizwe elinayo Isiko lewaka leminyaka ekusetyenzisweni nasekuvelisweni kweoyile yomnquma. Imveliso yayo igxile kwindawo ejikeleze uLwandle lweAegean.
Ukuma kwayo ngobuchule phakathi kweYurophu, iAsia neAfrika kuyivumele ukuba yenze imakethi yokunxibelelana phakathi kwamazwe kula mazwekazi mathathu, eyenza ukuba ibe lelinye lawona mazwe avelisa kakhulu i-oli yomnquma emhlabeni.
Inani leminquma eTurkey liqikelelwa ukuba liphindaphindwe kathathu kunenani labemi. NgokweBhanki yeHlabathi, ngo-2013, ngabantu abazizigidi ezingama-74,9. Kukho malunga nezigidi ezingama-250 zemithi yeminquma kulo lonke elaseTurkey.
Zininzi iindidi ze ioyile yomnquma eTurkey, kodwa eyona nto ixatyiswayo, yile iveliswe kwindawo yaseAyvalik, kunxweme loLwandle iAegean; incasa yayo ifana kakhulu neoyile ye-olive eyenziwa kwi-Tuscany yase-Italiya.
5. - iTunisia
I-Tunisia, nangona isohlwayo esisifumene kubunqolobi, esinikwe daesh nangaphambi koko, ngenxa 'yentwasahlobo yaseArabhu', iyaqhubeka nokukhula kwaye iyaqhubeka nokunika inqaku.
Abanye bamnika indawo yesine, kwaye imeko yakhe yinto ethile. Masibone.
E-Tunisia, i-oyile yomnquma imele i-40% yokuthumela ngaphandle kwezolimo kwilizwe liphela, kwaye ithumela uninzi lwabantu kumazwe afana ne-United States, kwaye ngaphandle kwayo yonke into, i-Itali neSpain.
Ngapha koko, kwi-2015, yayiyeyona nkokeli iphambili kuthengiso lwe-oyile ngaphandle, idlula i-Itali neSpain. La mazwe afumana isivuno esibi kakhulu kwiminyaka ngenxa yemozulu embi kunye nohlaselo.
Ingxaki yeyokuba iSpain ne-Italiya zazingenisa elizweni, kodwa i-oli ye-olive yayiyeyebhotile njengeyabo kwaye iTunisia yayingathathelwa ngqalelo njengomvelisi wale oli, into eyenzekayo eSpain ngeoyile eyithumela e-Itali.
Kwakuloo nyaka, ioli eyayithunyelwa eSpeyin yaphindeka kabini, yaza loo mveliso yathunyelwa eItali yaphindeka kathathu.
Ke ngoko, iqale ngaphakathi I-Tunisia iphulo lokubhotela ioyile kwilizwe lakho, Kwaye banelebheli ethi 'Yenziwe eTunisia' (Yenziwe eTunisia).
Ilizwe elingummelwane wethu likwangomnye wabavelisi abakhulu beoyile yomnquma, kwaye nangona ibilixhoba lokungahoywa, iyachacha kancinci. Kunye neTurkey neGrisi, ioyile yomnquma ePortugal indala: Ukuveliswa kwayo kususela kumaxesha oBukhosi baseRoma, ukuhlala kwama-Arabhu kunye namaxesha anamhlanje. Ngaphezulu kwe-50% yemveliso yayo yi-oyile ye-oliva enyulu esemgangathweni.
I-Syria ibhekene nexesha elibi, imfazwe yamakhaya kumacala amane okanye amahlanu ohlwaye ilizwe, ekukholelwa ukuba ioyile yomnquma yazalwa. Isenokungabi yintsomi, kulungile Uhlobo lokuqala lomthi womnquma, lwafunyanwa eSyria, kunye neminyaka engama-6.000, isasazeka kulo lonke elaseSyria de yafikelela kulwandle lweMeditera. Kude kube lixesha lokuqhambuka kwemfazwe, iSyria yavelisa iitoni ezingama-165.000 zeoyile yomnquma ngonyaka. Ndiyathemba ukuba yonke into ibuyela esiqhelweni apho ngokukhawuleza.
Amazwe avelisa ioyile yomnquma efanelekileyo kwihlabathi
Sikubonile oko nangona ISpain lelona lizwe livelisa kakhuluAyisiyiyo eyona ithumela ngaphandle kakhulu, kwaye ayisiyiyo eyenza eyona oyile icocekileyo emhlabeni. Ngoku, ukufumanisa ukuba yeyiphi eyona oyile intle emhlabeni, kubekho ukhuphiswano, kwaye okona kutshanje kwaye kufanelekile bekusekuqaleni kwalo nyaka eNew York, apho umgangatho weminquma, ixesha lokuvuna, ukuba apho zibanga ukuba zikhona, inqanaba lobumsulwa, njl.
Njengokuba sisazi ukuba iphi eyona wayini ilungileyo, sizama ukufumanisa ukuba yeyiphi eyona oyile ilungileyo emhlabeni. Olu luhlu lwalo khuphiswano:
5. - eUnited States
AbaseSpain bazisa iminquma kwindawo eyayisaziwa ngokuba yiNew Spain, ngoku eyiMexico, xa bathimba iMelika. Umazantsi eUnited States, ngakumbi iCalifornia, lelona lizwe livelisa ioyile yomnquma kwelo lizwe, eyayisakuba yiMexico.
Lilizwe esidibana nalo kunye neoyile yomnquma, enkosi kwiinoveli zikaHomer kunye neentsomi zamaGrike, kwaye kunjalo, kuba liyinxalenye yesisu sayo, abazalwana baseMeditera, ngapha koko.
Kwioli ezili-168 ze-oli yomnquma, ezili-19 zazinembasa yegolide, kwaza kwalishumi elinesithandathu.
Kukhuphiswano, abamelwane abangamaPhuthukezi bafumana iimbasa zegolide ezili-15 kunye neembasa zesilivere ezi-6, kwaye ezili-12 zeentlobo zabo zeoyile ziphakathi kweoyile ezilungileyo zonyaka ka-2015 yimibutho eyahlukeneyo ekhethekileyo.
I-Itali, kunye neSpain, iTurkey kunye neGrisi zinesiko elide lokwenziwa nokusetyenziswa kweoyile yomnquma. Ioyile zase-Italiya, ezingama-99 zizonke, zaphumelela amabhaso angama-43 I-9 yazo ilebheli ethi 'eyona ilungileyo', kwaye enye, zonke, ziimbasa zegolide.
Ewe, ilizwe lethu lineyona oyile intle emhlabeni, kwaye Iibhotile ezili-136 ezaya kukhuphiswano, ezingama-73 zanikwa amabhaso: iilebheli ezi-3 'ezigqwesileyo', iimedali ezingama-53 zegolide kunye nesilivere ezili-17, oko kukuthi, ii-oyile zaseSpain ezingama-54 zanikwa.
Kwakhona ioyile yeminquma yaseSpain iphumelele ukhuphiswano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Izaziso » Oyena mvelisi weoyile mkhulu
Ndiyithandile ioyile yase-Syria yase-Doly, kodwa andiyifumani kwakhona….
Ukuba kwiinzuzo ezinkulu, uthengise okanye ulinde?
Umndilili ophantsi okanye ngaphezulu, ngaba kuyinzuzo kwimarike yesitokhwe?